Algeria: Qalabka booliska oo muhiim u ah subaxdii 8e Jimcihii dibad baxa - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Aljeeriya: Qalabka booliska oo muhiim u ah subaxdii 8e Jimcihii dibad baxa
Inkasta oo jidka ayaa in la leexiyo ah todobaadyadii la soo dhaafay gaar ahaan bixitaankii Abdelaziz Bouteflika, abaabulka caan ah ayaa aaminsan in is casilaada sida iyo taqaluseyso lahaa oo dhan hogaamiyayaal gudashada "nidaamka" ku. Aljeeriya waxay isku diyaarinayaan jimce siddeed wakhti ah oo abaabul ah. Qalabka muhiimka ah ee bilaysku wuxuu gooyaa caasimadda.
habeenkii khamiista, bilayska rabshad, koofiyado ay buluug la jiray ku dhowaad tiradiisu tahay sida ay dibad ugu horeysay horay isugu yimaadeen waddada astaan ​​saldhigga weyn ee bartamaha Algiers. Waayo, markii ugu horeysay, waxaana jira cabsi ah fatahaad. gendarmerie ayaa lagu rakibay xireenno shaandhaynta on waddooyinka waaweyn taasoo keentay in caasimadda.
Tani waa Jimcaha ugu horreeya ee ka urursatid tan magacaabidda Abdelkader Bensalah Madaxweynaha ku meel gaarka ah. Oo waxay si hufan yahay waxan aamin Abdelaziz Bouteflika oo haatan ugu cad cadhadii jeeriyaan ah. wadada wuxuu u baahan yahay in uu ka tagay iyo in dhammaan saraakiisha taliska. Waayo, dhowr maalmood, Taliyaha Shaqaalaha Ciidanka isku dayo in ay dajiyaan jidadka aan micne lahayn. Ahmed Gaid Salah ayaa xitaa vouched muddo guurka.
Maya, ma sheeg Aljeeriya: " Bouteflika ayaanan ku daba joogin si uu u soo kabsado gacantiisa midig ". Mucaaradku waxay sidaa ku dheceen maalin kasta toddobaadkan.
Laakiin yaa beddeli kara hoggaamiyeyaasha ku habboon "nidaamka" ee indhaha dadka dibad baxayaasha ah, gaar ahaan sidee? Bulshada rayidka ah ee Aljeeriya way isweydiisaa. Doodsi muwaadin ah ayaa Khamiistii ka dhacay magaalada Algiers.
Qodobka Source: http://www.rfi.fr/afrique/20190411-algerie-dispositif-policier-important-aube-8e-vendredi-contestation